प्रेममा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा... - TodayKhabar
आजकल प्रेममा पर्ने अधिकाशं जोडीले भेटघाट गर्नुलाई डेटिङ भन्दछन् । डेटिङमा जादाँ गरिएको खानपान तथा खर्चको बील प्रायः प्रेमी अर्थात पुरुषले नै तिर्ने गरेका छन् ।
यसो गर्नुको पछाडि रोजगारमा बढि पुरुष भएकोले वा प्रेमिकासँग पैसा छैन भन्ने कारणले पनि हुने गर्दछ ।
कतिपय अवस्थामा भने डेटिङको बील पुरुषले नै तिर्नुपर्ने मान्यता रहदै आएको छ । तर डेटमा बील कसले तिर्नुपर्छ त ?
कसले तिर्नुपर्छ बिल ?
महिला र पुरुष बराबर छन् भन्ने सोचको विकास भइरहेको बेला डेटिङमा जादाँ सकेसम्म दुबैजनाले बील तिर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर यसको मतलब हरेक खर्चको आधाआधा भन्दा पनि कुनै एक शीर्षकको बील प्रेमीले तिर्ने र अर्को शीर्षकको बिल प्रेमिकाले तिर्नु राम्रो मानिन्छ ।
यसले डेटमा जादाँ कोहि एकजनालाई मात्र खर्च गराउने स्थितिबाट बचाउँछ । साथै पैसा तिरेकै भरमा कुनै स्वार्थपूर्ति गर्नबाट समेत बचाउने गर्दछ । तर यसो भन्दैमा जागिर नभएको वा रकम नभएको अवस्थामा पनि बील तिर्नुपर्छ भन्ने चाहि होइन । यस्तो अवस्थामा जोसंग पैसा छ उसैले बील तिर्दा हुन्छ ।
प्रेमिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा
कतिपय प्रेमिकाहरु डेटमा गएको बेला प्रेमीलाई खर्च गराउन लगाउछन् । सपिङ गर्ने भन्दै आफ्नो सौख अनुसारको सामाग्रि किन्न लगाउछन् । तर यसो गर्दा पुरुषलाई आर्थिक भार पर्ने त छदैंछ साथै उसले आफ्नी प्रेमिका प्रतिको भावना पनि नकारात्मक बनिदिन्छ ।
साथै उनीहरु खर्च गरेपछि त्यसबाटै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न प्रेमिकालाई दबाब समेत दिन सक्छन् । तसर्थ डेटमा रहेको बेला प्रेमीको चाहाना बाहिर गएर कुनै वस्तु खरिदका लागी दबाब दिनु राम्रो होइन ।
महिलाले आफ्नो रुप–रंग तथा पहिरनको जोहो आफै गर्नु उत्तम हुन्छ । उत्कृष्ट सम्बन्धका लागि प्रेमी प्रेमिकाको आत्मियता र भावना मिल्नु महत्वपुर्ण हो ।
त्यसैले डेटमा जादाँ आएको बील हेर्ने बानि प्रेमिकाले बसाउनु पर्छ । साथै आफ्नो क्षमता अनुसार खर्चमा योगदान गर्नुपर्छ ।
से’क्स र कारबीच गहिरो सम्बन्धः सानै उमेरमा कार चलाउनेहरु बढी से’क्स गर्ने गरेको खुलासा
स्याङ्जामा पहिरो : ९ जनाको मृत्यु, थप विवरण आउन बाँकी